Xasuusinta Cashuurta marka Dib loogu noqonayo Dugsiyada: Waxbarashada Minnesota Ku Kordhin Iyo Ka Saarid | LawHelp Minnesota
Xasuusinta Cashuurta marka Dib loogu noqonayo Dugsiyada: Waxbarashada Minnesota Ku Kordhin Iyo Ka Saarid
Xasuusinta Cashuurta marka Dib loogu noqonayo Dugsiyada: Waxbarashada Minnesota Ku Kordhin Iyo Ka Saarid (PDF)267.65 KB
Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadlaysaa sidda ay dhici karto inaad ku hesho lacag canshuur kaaga soo noqota ama ka jarid dakhligaaga lacag aad ku kharash garaysay sahay iskuulka.
Meel dhigo Rashiidyada Sahayda Iskuulka si aad ugu Isticmaasho Canshuur Celintaada Gobolka!
Kolka aad xareysato canshuur celintaaga gobolka Minnesota, waxaa dhici karta inaad awoodo inaad sheegato labada mid lacagta kiridhidka canshuurta gobolka ah ama midda ka jaritaanada ku saabsan ee kharashaadka ku shaqadda leh tacliinta ilmahaaga. Arritani waxa ay quseeysaa ilmaha uulada (kindergarden) ka ilaa iyo dugsiga sare ku jira.
Qaadashada kiridhidku waxa ay yareeysaa cadadka canshuurta ah ee aad bixinayso. Haddii lacagta kiridhidka ahi ay ka badan tahay canshuurta aad bixinayso, waxa kuu noqon karta lacag. Laakiin haddii lacag badan aad sameyso ma aad sheegan kartid lacagta kiridhidka ah. Haddii arrintu ay saa tahay kolkaa waxa aad isticmaali kartaa ka jaritaanka.
Jaritaanku waxa uu yareeyaa dakhligaaga kolkaa waxaa lagugu yeelan canshuur yar. Laakiin lacagi kuuguma soo noqon adeegsiga jaritaanka.
Marmar dhif ah, waxa aad sheegan kartaa lacagta kiridhidka ah iyo jaritaanka labadaba. La hadal canshuur buuxiye haddii aad haysato ilmo dhigta dugsi sare aadna bixiso kharash koorsooyin uu kuleej ka qaato ama khidmad iskuul lacag ah oo ilmahu dhigto.
Ku Darid (U Xisaabin)
Ku daridda aad heli kartid waxay ku egtahay 75% kharajka mudan in aad xisaabsato oo aad sanadka ku bixisay waxbarashada caruurtaada ee mudan ee fasalada K-12 waxbarashada ku jira, illa tirsiga ugu sareeya. 25% ee soo hartay ee kharajka muhimadda leh, looma isticmaali karo in aad ku dacwooto ka jarid cashuurta. Kiridhidka ugu badani waa $1,000 oo ilmo walba oo qoyska ka mid ah laakiin waa la dhimi karaa haddii dakhligaagu uu aad u sareeyo.
Tusaale ahaan, haddii ay aad haysato 1 ama 2 ilmood, oo xaq u leh, waxa aad sheegan kartaa haddii dakhliga qoyskaagu uu yahay $37,500 ama uu ka yar yahay. Haddii aad haysato ilmo ka badan 2 ilmood, xadka dakhligu waxa uu kor aadaa $2,000 ilmo walba oo dheeraad ah.
Hubi shaxda Household Income for the K-12 Education Credit ( Ku darka Dakhliga Qoyska leh caruur dhigta fasalka K -12) ku taal goobta Waaxda Dakhliga Minnesota http://www.revenue.state.mn.us. “Dakhliga” waxaa ku jira dhamaan dakhliga aan la cashuuri karin, sida gargaarka dadweynaha ee lacagta caddaanka ah, iyo samafalka.
Haddii aad xaas tahay oo aad cashuurta ku xeraynaysid xaas kala nool ha ku dacwoon ku darka.
Dakhligu ma khuseeyo ka jaridda. Ka jariddu waxay ku egtahay $1624 ee arday kasta oo u qalma kuna jira fasalka K – 12.
Caruurta dhigata fasalka 6aad iyo 7aad isticmaal xaddiga la ogolyahay ee fasalk ardayga dhamaadka sannad cashuureedka. Caruurta bilowday kuliyadda inta lagu jiro sannad cashuureedka, isticmaal xaddiga fasalka 12aad. Laakiin dugsiga sare waxaad keliya oo aad ka jari kartaa kharajka waxbarasho ee mudnaanta leh.
Sidoo kale, si aad u sheegato ka jarida, ilmahaagu waa inuu iskuul la dhigtay gobolada Minnesota, Wisconsin, Iowa, North Dakota, ama South Dakota.
Maxaan u baahnahay si aan ugu dacwoodo waxyaabaha lagu kordhiyey ama reebay?
Si aad u dacwootid ku darid iyo ka goyn kaydi xaashida lacag bixinta (risiidka) marka aad qalabka dugsiga iibsatid , oo ay ku jiraan qalmaanta qoriga ah, qalimada, qalimada wax lagu midabeeyo, buuga wax lagu qorto, kaalkulaytar iwm.
Waxaad kaloo ku dacwoon kartaa kharajyada ay ka mid yihiin:
Kharashkaadka qalabka kumbuyuutarka iyo soofti weerada tacliinta (ilaa iyo $400)
Macallin caruurta wax kuu bara
Buugagta waxlaga barto
Kharajka gaadiidka ee la siiyay cid kale
Barnaamijyada warbarasho ee dugsiga markuu dhamaado la bixiyo
Xeryaha waxbarasho ee xagaaga
Qaar ka mid kharashaadka waxaa lagu xisaabiyaa jaritaanka laakiin laguma xisaabiyo kiridhidka. Tusaale ahaan, waxa aad u isticmaali kartaa kharashaadka khidmaha iskuuladda lacagta ah ama koorsooyinka kuleejka (inta ilmahaagu uu dhigto dugsiga sare) kaliya jaritaanka.
Qaar ka mid ah kharashaadka laguma xisaabin karo labada midna kiridhidka ama jaritaanada. Kuwaa waxaa ku jira kharashaadyada xeryaha kubada, ama casharada iyo socdaalada, jiifka iyo cuntada ee safarada fasalka ee habeenkii la dhaxayo.
Si aad ugu dacwooto ku darid, buuxi jadwalka M1ED ee foomka cashuurta gobolka ee Minnesota.
Si aad u qaadato ka jaridda marka dakhliga qoysku uu ka sareeyo xaddiga ugu badan ee aad u dacwoon kartid, isticmaal tilmaan bixinta warqadda ay ku taal jadwlaka M1ED.
Xusuuso waa IN AAD haysataa waraaqaha aad wax ku gadatay (risiidka) si aad ugu dacwootid ku dar ama ka goy. Kuma dacwoon kartid isla kahrajkii aad u iticmaashay ku dar in aad u isticmaalsho ka goy.
Haddii aad u baahantahay macluumaad iyo faahfaahin dheeraad ah ee liiska khrajyaka aad ku dacwoon kartid, ka fiiri mareegta Waaxda Dakhliga ee Gobolka Minnesota http://www.revenue.state.mn.us oo geli baar weedha “Ku darid iyo Ka goyn ee Waxbarasho”
Waxaad kaloo ka heli kartaa xog aruursan oo kharashayada ku saabsan (fact sheet about expenses) barta: https://www.revenue.state.mn.us/sites/default/files/2019-01/fact_sheets_fs8.pdf.
Si aad u xaqiijiso in aad heshay lacag celinta, tag barta diyaarinta cashuurta oo lacag la’aan ah. Si aad u hesho bar lacag la’aan ah wac (651) 297‑3724 or (800) 543-7709.
Tag www.irs.gov/vita si aad wax badan uga baratid sida caawimo iskaa wax u qabso ah ee Cashuurta Dakhliga loo sameeyo, iyo la talinta cashuuraha dadka waaweyn.